Android Market inofa, Google Play Store inoberekwa | Kubva kuLinux
Android Market yakave nekugamuchirwa kunoshamisa, muchokwadi Gumiguru gore rapfuura rakapfuura iOS muhuwandu hwekurodha pasi. Uye idzi nhau pasina mubvunzo dzichaita kuti ikure zvakanyanya 😀
Zvinoitika izvozvo Android Market inonyangarika, zvino ichatumidzwa Google Play Store.
Ndezvipi zvakanaka izvo izvi zvinotiunzira?
Chekutanga pane zvese, isu tinowana zvese zvaivapo mu Android Market ikozvino mukati Google Play Store, saka hapana chaticharasa.
Mune ramangwana, zvese zvichave zvinonzwisisika, nzira iyo zvirimo zvinobatana nazvo icharerutswa.
Zvese zvemukati zvakapararira pamhando dzakasiyana siyana (Google Music, nezvimwe) mune imwechete, yakasanganiswa sevhisi.
Uye zvakare, vagadziri vaive vakaganhurirwa neavo makumi mashanu emakumi marefu paApp, ikozvino pachinzvimbo chekuve ne50MB vanozove neinosvika 50GB 🙂
Muchidimbu ... ikozvino vashandisi ve Android ivo vanozove neakawanda marongero haha, mashoma matambudziko 😀
Kwaziwai uye makorokoto !!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » GNU / Linux » Android Market inofa, Google Play Store inoberekwa
Ndinotsvaira pamukaka uye paGoogle !!! Uye izvo zvaunotaura mune yako chinyorwa hazvikuyeuchidze nezve chero chinhu ?????? Ini handizive, asi zvinonzwika kwandiri kunge chimwe chitoro / software inonzi iTunes, uko zvigadzirwa zvese zvinopihwa neimwe kambani inonzi Apple zvakabatana zvakasangana. Uye zvino "fandroids" inotsamwa kana Android / Google ichipomerwa mhosva yekuteedzera Apple
Pindura kuna 3ndriago
Ini handione chero chakakanganisika neappstore kana iyo itunestore, muchokwadi zvinoita kuti hupenyu huve nyore uye inobatsira kuwana epamusoro mhando zvirongwa nemutengo wakaderera.
Uye izvozvo zvinofanirwa kuitei? Kubva payakatanga Android yakateedzera zvishoma kubva kuIOS, uye nhasi iOS inoteedzerwawo kubva kuApple. Iyi "unonditeedzera, ndinokuteedzera iwe", uye hazvidziviriki (zvakanaka, kune zvibvumirano, asi ndinofunga taona kwavanotungamira, kwete Apple? ¬¬). Iye zvino, pfungwa yacho yakafanana, asi Google Play haizotarisike zvakafanana neTunes, saka neimwe nzira tichava nehumwe hunhu. Kana kwete?
Ongorora: Ini ndiri Android mushandisi, kune chinyorwa.
Iyo iTunes nyaya haina kana kuyambuka pfungwa dzangu. Chandaifunga ndechekuti vakachinja zita kuti vadzime San Benito iyo iyo Android Market izere neMalware. 😛
maapplication eApple akadaro
Icho chaive chinhu chakanakisa chakaitwa negoogle, ikozvino tave nazvo zvese pamwechete pane peji reGoogle
Pindura kune zveapplication
Ndakapengeswa nefoni yangu nekuti yaive nemusika uye ikozvino kuti pasi peapplication haivhure nekuti vaenda kuchitoro chekutamba. .uye ini ndinoedza kurodha pasi kubva ku playstore uye haina kunditendera
Pindura kuna arnul
Kune yangu Android musika yakafa apo ini pandakawana aptoide inova yangu nzira yakanakisa yandinokusiya pano padandemutande kwandakarodhaunirodha http://www.aptoide.info
Dhawunirodha Blackmart Alpha akadaro
Ini zvakare ndinoshandisa blackmart alpha. Saka ndinogona kudhawunirodha maapplication piritsi rangu ndisina kuita yekutamba chitoro.
Pindura Kutora Blackmart Alpha
Kupa Marlin mukana